भविष्यका लागि शिक्षामा सात जटिल पाठ - शान्ति शिक्षाको लागि वैश्विक अभियान
भविष्यको लागि शिक्षामा सात जटिल पाठहरू
नोभेम्बर 29, 2020 प्रकाशन 0
(बाट पोस्ट गरियो UNESDOC डिजिटल पुस्तकालय। २००१)
मोरिन, E. (२००१) भविष्यको लागि शिक्षामा सात जटिल पाठहरू। पेरिस: संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन।
एडगर मोरिन द्वारा
पूर्ण प्रकाशन डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
जब हामी भविष्यको बारेमा हेर्छौं हामी हाम्रा बच्चाहरू, नातिनातिनाहरु र नातिनातिनाहरु, को संसारको बारेमा धेरै अनिश्चितताहरूको सामना गर्छौं। तर हामी कम्तिमा एउटा कुरामा निश्चित हुन सक्छौं: यदि हामी यस पृथ्वीलाई यसको बासिन्दाहरूको आवश्यकताको लागि प्रदान गर्न चाहन्छौं भने मानव समाजमा परिवर्तन हुनुपर्दछ। २१ औं शताब्दी र नयाँ सहस्राब्दीमा हामी जान्छौं भोलिको संसार मौलिक रूपमा हामीले थाहा पाएको संसार भन्दा फरक हुनुपर्दछ। हामीले 'दिगो भविष्य' निर्माण गर्न प्रयास गर्नुपर्दछ। प्रजातन्त्र, इक्विटी, सामाजिक न्याय, शान्ति र हाम्रो प्राकृतिक वातावरण संग सद्भाव आउन यो संसारको वाचवर्ड हुनु पर्छ। हामीले हाम्रो जीवनशैलीको आधारमा 'स्थायित्व' को धारणा अवश्य सुनिश्चित गर्नुपर्दछ, हाम्रा देशहरू र समुदायहरूको शासन चलाउने र विश्वव्यापी रूपमा अन्तर्क्रिया गर्ने।
शिक्षा, शब्दको व्यापक अर्थमा, हाम्रो जीवन र व्यवहार गर्ने तरिकामा मौलिक परिवर्तनहरूको उद्देश्यले यस विकासको लागि एक अग्रगामी भूमिका खेल्छ। शिक्षा 'भविष्यको लागि बल' हो किनभने यो परिवर्तनको सब भन्दा शक्तिशाली उपकरणहरू मध्ये एक हो। हामीले सामना गर्ने सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बढ्दो जटिल, छिटो परिवर्तन हुने, अप्रत्याशित संसारको चुनौती सामना गर्न हाम्रो सोच्ने तरिकालाई कसरी समायोजित गर्ने भन्ने हो। हामीले ज्ञानको आयोजन गर्ने हाम्रो तरिकामा पुनर्विचार गर्नुपर्दछ। यसको मतलब अनुशासनहरूको बिच परम्परागत अवरोधहरू तोड्नु र नयाँ फाँटहरू छुट्याउनु जुन फेरि फाटिएको छ। हामीले हाम्रो शैक्षिक नीति र कार्यक्रमहरूको पुन: डिजाइन गर्नु पर्छ। र जब हामी यी सुधारहरूलाई प्रभावकारी बनाउँछौं तब हामीले लामो अवधिसम्म हाम्रो नजर राख्नुपर्नेछ र भविष्यका पुस्ताहरूका लागि हाम्रो ठूलो जिम्मेवारीको सम्मान गर्नुपर्नेछ।
शिक्षा 'भविष्यको लागि बल' हो किनभने यो परिवर्तनको सब भन्दा शक्तिशाली उपकरणहरू मध्ये एक हो। हामीले सामना गर्ने सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बढ्दो जटिल, छिटो परिवर्तन हुने, अप्रत्याशित संसारको चुनौती सामना गर्न हाम्रो सोच्ने तरिकालाई कसरी समायोजित गर्ने भन्ने हो।
युनेस्कोले स्थायित्वका हिसाबले शिक्षामाथि पुनर्विचार गर्न गहन प्रयत्न गरेको छ, विशेष गरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी विकास आयोगले १ 1996 XNUMX in मा शुरू गरेको शिक्षा, सार्वजनिक जागरूकता र दिगो प्रशिक्षणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कार्य कार्यक्रमको मार्गनिर्देशक शक्तिको रूपमा हाम्रो कार्यको सन्दर्भमा। यस परियोजनाले सदस्य राष्ट्रहरूले अनुमोदित प्राथमिकताहरूलाई स्पष्ट पार्छ र ती राज्यहरू, गैरसरकारी संस्था, व्यवसाय, उद्योग, र शैक्षिक समुदाय, संयुक्त राष्ट्र संघ प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूसँग मिलेर राष्ट्रिय शैक्षिक नीतिहरूको उल्लेखनीय सुधार गरी कार्यान्वयनका लागि तुरुन्त कदम चाल्न आह्वान गर्दछ। र कार्यक्रमहरू, दिगो भविष्यको लागि शिक्षाको नयाँ अवधारणा। युनेस्कोलाई यस महत्त्वपूर्ण प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यवाहीलाई अगाडि बढाउन र परिचालन गर्न आग्रह गरिएको छ।
यस उद्देश्यका लागि युनेस्कोले एड्गर मोरिनलाई भविष्यको शिक्षाको आवश्यक कुराहरूमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्न आमन्त्रित गर्‍यो जुन उनको 'जटिल सोच' को अवधारणाको आधारमा हेरिएको थियो। युनेस्कोले यहाँ प्रकाशित निबन्ध टिकाऊ विकासको दिशामा शिक्षालाई पुन: स्थापना गर्ने तरिकाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय बहसको लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। एडगर मोरिनले सात महत्वपूर्ण सिद्धान्तहरू सेट गरे जुन उनलाई भविष्यको शिक्षाको लागि आवश्यक छ। हाम्रो ठूलो इच्छा यो हो कि उसका विचारहरूले बहसलाई प्रोत्साहित गर्दछ र शिक्षक र अधिकारीहरूलाई यस गम्भीर समस्यामा आफ्नै विचारहरू स्पष्ट गर्न मद्दत गर्दछ।
हामी "युनिस्कोको" सँग मिलेर एड्गर मोरिनको उदार सहभागिताको हार्दिक सराहना गर्दछौं, "एक स्थायी भविष्यको लागि शिक्षा" ट्रान्सडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट भित्र रहेको प्रतिबिम्बलाई उजागर गर्ने र उन्मुख बहसलाई प्रोत्साहित गर्न। र हामी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं जसका टिप्पणीहरू र सुझावहरू यस निबन्धको लागि महत्वपूर्ण योगदान थियो, विशेष गरी नेल्सन भालेजो-गोमेजलाई धन्यवाद। भविष्यको तयारीको लागि अपरिहार्य सोचको तरिकामा गम्भीर परिवर्तनलाई बढावा दिन युनेस्कोको चलिरहेको प्रयासमा एडगर मोरिन जस्ता प्रख्यात चिन्तकहरूको प्रतिबद्धता र बुद्धिमत्ता अमूल्य योगदान हो।
यो पाठ कुनै सुझाव गरिएको शैक्षिक गाइड वा पाठ्यक्रम भन्दा पहिले खडा छ। यो विषयहरु को समग्रता कभर गर्न को लागी होईन जुन सिकाईन्छ वा सिकाउनु पर्छ। उद्देश्य केवल शिक्षामा बेवास्ता वा बेवास्ता गरिएको मौलिक समस्याहरू पहिचान गर्नु हो, र भविष्यमा सिकाउनु पर्छ।
यी 'सात पाठ', वा आवश्यक ज्ञानका सात पक्षहरू, कुनै समाज वा संस्कृतिको लागि उपयुक्त साधन र नियमहरू अनुसार, प्रत्येक संस्कृतिमा सबै समाजहरूमा भविष्यको लागि शिक्षाको लागि शिक्षामा, कुनै पनि बहाना वा बहिष्कार बिना कभर गरिनु पर्छ।
वैज्ञानिक ज्ञान जुनमा हामी यहाँ निर्भर छौं मानवीय अवस्थाको हाम्रो दृष्टिकोणलाई समर्थन गर्न अस्थायी र खुला-अन्त हो; यसले हामीलाई ब्रह्माण्डको गहन रहस्यहरू, जीवन, मानवको जन्मको साथ छोडिदिन्छ। विज्ञान अस्वीकार्यमा खुल्छ जहाँ संस्कृति र सभ्यता मार्फत दार्शनिक विकल्पहरू र धार्मिक विश्वासहरू खेलमा आउँछन्।
सात जटिल पाठहरू
अध्याय १: त्रुटि र भ्रम पत्ता लगाउँदै
शिक्षाको उद्देश्य ज्ञान प्रसारित गर्नु हो, र यूट्युटिकेसन मानव ज्ञानको वास्तविकता, ईटस्सिस्टम, अशक्तता, कठिनाइ, र यसको त्रुटि र आवाश्यकतामा अन्धा छ। शिक्षा ज्ञान के हो भनेर सिकाउन चिन्तित हुँदैन।
ज्ञान एक तयार उपकरणको रूपमा चलाउन मिल्दैन जुन यसको प्रकृति अध्ययन नगरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। ज्ञानको बारेमा जान्नु भनेको मानव दिमागलाई परजीवीकरण गर्ने त्रुटि र भ्रमको निरन्तर खतराको सामना गर्न दिमागलाई तयार गर्न प्राथमिक आवश्यकताको रूपमा हुनु पर्छ। यो लसिडिटीको लागि महत्वपूर्ण लडाईमा सशस्त्र दिमागको प्रश्न हो।
हामीले मानवीय ज्ञानको सांस्कृतिक, बौद्धिक र मस्तिष्क सम्बन्धी गुणहरू, यसको प्रक्रियाहरू र रूपहरू र मनोवैज्ञानिक र सांस्कृतिक स्वभावको अध्ययन परिचय र विकास गर्नुपर्दछ जसले हामीलाई त्रुटि र भ्रमको सिकार बनाउँदछ।
अध्याय २: प्रासंगिक ज्ञानका सिद्धान्तहरू
यहाँ एक प्रमुख समस्या हो जुन सँधै गलत अर्थ लगाइन्छ: कसरी सिक्ने तरिकालाई प्रोत्साहित गर्ने कि सामान्य, आधारभूत समस्याहरू बुझ्ने र तिनीहरूभित्र आंशिक, अनुबन्धित ज्ञान सम्मिलित गर्न सक्षम छ।
अनुशासनमा विभाजित खण्डित सिक्ने प्रबलता प्राय: हामीलाई भाग र पूर्ण जडान गर्न असमर्थ बनाउँछ; यो सिक्ने द्वारा प्रतिस्थापित गर्नुपर्दछ जुन तिनीहरूको प्रसंग, तिनीहरूको जटिलता, उनीहरूको समग्रता भित्र विषयहरू बुझ्न सक्दछ।
हामीले मानवीय दिमागको प्राकृतिक योग्यताको विकास गर्न सबै प्रस all्ग र एकाइ भित्र राख्नु पर्छ। हामी एक जटिल दुनिया मा भाग र सम्पूर्ण बीच पारस्परिक सम्बन्ध र पारस्परिक प्रभाव समझाउन को विधिहरू सिकाउनु पर्छ।
अध्याय:: मानव अवस्था सिकाउँदै
मानव शारीरिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक जीवहरू हुन्। मानव प्रकृतिको यो जटिल एकता यति राम्ररी विभाजित गरिएको शिक्षाबाट विभाजित भएको छ कि हामी अब मानव के अर्थ के हो भनेर जान्न सक्दैनौं। एकताका बीच यो घुलनशील जडान र सबै मानव को विविधता को बीच।
अध्याय:: पृथ्वी पहिचान
मानव विधाको भविष्य अब एक ग्रहको पैमाने मा स्थित छ। यो शिक्षाले बेवास्ता गरेको अर्को अत्यावश्यक वास्तविकता हो जुन एक प्रमुख विषय बन्नु पर्छ। वर्तमान ग्रहका घटनाक्रमहरूको ज्ञान जुन पक्कै २१ औं शताब्दीमा निस्सन्देह तीव्र हुनेछ, र हाम्रो पृथ्वीको नागरिकता मान्यता, हामी सबैको लागि अपरिहार्य हुनेछ।
ग्रह युगको इतिहास सोह्रौं शताब्दीको शुरुदेखि नै सिकाउनु पर्दछ, जब सबै पाँच महाद्वीपहरू बीच सञ्चार स्थापित गरिएको थियो। विगत र वर्तमानमा दमन र प्रभुत्वको विनाशलाई अस्पष्ट नगरी, हामीले देखाउनु पर्छ कि संसारका सबै भागहरू कसरी एक आपसमा निर्भर हुन्छन्।
बीसौं शताब्दीमा ग्रह स crisis्कटको जटिल कन्फिगरेसनलाई सबै मानवजातिले कसरी एकै किसिमको जीवन-मृत्युको समस्याहरूको सामना गर्नुपर्दछ र समान भाग्य साझा गर्दछन् भनेर देखाउन स्पष्ट पार्नुपर्दछ।
मानिस बीचको पारस्परिक समझ, चाहे नजिक होस् या टाढा, अबदेखि मानव सम्बन्धलाई गलतफहमीको बर्बर अवस्था पार गर्नका लागि अत्यावश्यक आवश्यकता हो।
अध्याय:: अनिश्चितताहरूको सामना गर्दै
हामीले विज्ञान मार्फत धेरै निश्चितताहरू प्राप्त गर्यौं तर बीसौं शताब्दीको विज्ञानले पनि अनिश्चितताको धेरै क्षेत्रहरू प्रकट गरेको छ। शिक्षाले भौतिक विज्ञान (माइक्रोफिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ब्रह्माण्डोलजी), जैविक विकासको विज्ञान, ऐतिहासिक विज्ञानहरूमा देखा परेको अनिश्चितताको अध्ययन समावेश गर्नुपर्दछ।
हामीले अवसरको सामना गर्नका लागि रणनीतिक सिद्धान्तहरू, अप्रत्याशित र अनिश्चित, र नयाँ जानकारीको निरन्तर अधिग्रहणको प्रतिक्रियाका लागि यी रणनीतिहरू परिमार्जन गर्ने तरिकाहरू सिकाउनु पर्छ। हामीले निश्चित टापुहरूमा र यसको वरिपरि यात्रा गर्दै अनिश्चितताहरूको समुद्रीमा नेभिगेट गर्न सिक्नु पर्छ।
'देवताहरूले हामीलाई धेरै आश्चर्य दिन्छन्: अपेक्षित घटित हुँदैन र तिनीहरूले अप्रत्याशितको लागि ढोका खोल्छन्।' यी प lines्क्तिहरू, पच्चीस शताब्दी भन्दा अघि ग्रीक कवि युरीपाइड्स द्वारा रचेको भन्दा पहिले प्रासंगिक भन्दा बढी हो। मानव इतिहासको निर्धारवादी धारणा जसले हाम्रो भविष्यवाणी गर्ने दाबी गर्दछन् त्यागेका छन्, हाम्रो शताब्दीका ठूला घटनाहरू र दुर्घटनाहरूको अध्ययनले तिनीहरू कति अप्रत्याशित थिए भन्ने कुरा देखाउँदछ, मानव साहसको बाटो अप्रत्याशित छ: यसले हामीलाई आशा गर्न हाम्रो दिमागलाई तयार पार्न उक्साउनु पर्छ। अप्रत्याशित र यसको सामना। प्रत्येक व्यक्ति जसले शैक्षिक जिम्मेवारी लिन्छन् हाम्रो समयमा अनिश्चितताको अगाडि पोस्टहरूमा जान तयार हुनुपर्दछ।
अध्याय:: एक अर्कालाई बुझ्ने
बुझ्ने दुबै माध्यम र मानव संचारको अन्त्य हो। र अझैसम्म हामी बुझाइ सिकाउँदैनौं। हाम्रो ग्रहले सबै दिशामा पारस्परिक समझदारीको लागि कल गर्दछ। सबै उमेरमा सबै शैक्षिक स्तरहरूमा शिक्षण समझदारीको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै, यस गुणको विकासको लागि मानसिकताको सुधार आवश्यक छ। यो भविष्यको लागि शिक्षाको काम हुनुपर्छ।
त्यसकारण, गलतफहमी यसको स्रोतहरू, रूपहरू र प्रभावहरूमा अध्ययन गर्नुपर्दछ। यो सबै अधिक आवश्यक छ किनकि यो जातीयता, क्सीनोफोबिया, भेदभावको लक्षणहरूको सट्टामा कारणहरूमा भालू छ। र सुधारिएको समझ-को शिक्षा-शान्ति को एक ठोस आधार गठन हुनेछ जुन हामी फाउन्डेशन र पेशागत द्वारा संलग्न छौं।
अध्याय:: मानव विधाको लागि नैतिकता
शिक्षाले मानवीय अवस्थाको टेनिरी गुणस्तरको मान्यताबाट 'मानवशास्त्र-नैतिकता'तर्फ डो .्याउनु पर्छ: मानव एक व्यक्ति an समाज ↔ प्रजाति हो। यस अर्थमा, व्यक्तिगत / प्रजाति नैतिकता को एक व्यक्ति द्वारा समाज को नियन्त्रण र समाज द्वारा एक व्यक्ति को नियन्त्रण को आवश्यकता छ; अर्को शब्दमा, प्रजातन्त्र। र व्यक्तिगत ↔species नैतिकता एकवीसौं शताब्दी मा विश्व नागरिकता को लागि आह्वान गर्दछ।
नैतिकता नैतिक पाठ सिकाउन सकिदैन। जनचेतनाको माध्यमबाट यसले व्यक्तिहरूको दिमागमा यस्तो आकार लिनुपर्दछ कि मानव एकै समयमा र एकै समयमा एक व्यक्ति, एक समाजको सदस्य, प्रजातिको सदस्य हो। प्रत्येक व्यक्ति आफैमा यो ट्रिपल वास्तविकता बोक्छ। सबै वास्तविक मानव विकासमा व्यक्तिगत स्वायत्तताको साझा विकास, समुदायको सहभागिता र मानव प्रजातिसँग सम्बन्धित जागरूकता समावेश गर्नुपर्दछ।
यस बिन्दुदेखि नयाँ सहस्राब्दीका दुई ठूला नैतिक / राजनैतिक अन्तिमताहरू आकार लिन्छन्: लोकतन्त्रको माध्यमबाट समाज र व्यक्तिहरू बीच पारस्परिक नियन्त्रणको सम्बन्ध स्थापना, ग्रह समुदायको रूपमा मानवताको पूर्ति। शिक्षाले हाम्रो धरती-होमल्याण्डको सचेतनामा मात्र योगदान पुर्‍याउँदैन, यो जागरूकतालाई हाम्रो पृथ्वीको नागरिकता महसुस गर्ने इच्छामा अभिव्यक्ति फेला पार्न मद्दत गर्दछ।
स्थायी शान्ति को लागी शिक्षा को लागी जर्ज आर्नोल्ड वरिष्ठ फेलो: आवेदनहरु को लागी कल गर्नुहोस्
रुवाण्डा: किन नरसंहार विचारधारा अध्ययनहरू शान्ति निर्माणमा प्रमुख छन्
2 सक्छ, 2017 समाचार र हाइलाइटहरू, नीति 0
२०१० को शिक्षा सबै वैश्विक अनुगमन रिपोर्टले पत्ता लगायो कि प्राथमिक र माध्यमिक दुबै स्तरमा सिकाइएको इतिहासले विगतको संस्करणलाई औंल्याउँछ कि औपनिवेशिक रूढीवादी र रुवान्दान इतिहासको व्याख्यामा आधारित छ, जसले त्यस अवधिमा राजनीतिक विचारधारालाई समर्थन गर्थ्यो र द्वन्द्वको लागि उर्वर भूमि स्थापना गर्‍यो। र नरसंहार। जे विद्यार्थीलाई पढाइन्छ त्यसले उनीहरूमा आजीवन प्रभाव पार्छ र ठूलो हदसम्म तिनीहरूको जीवन र उनीहरूका भविष्यका निर्णयहरूको धारणा निर्धारण गर्दछ। एकीकृत नरसंहार विचारधाराको अध्ययनको परिचयमा यो कुरा ठ्याक्कै मिल्छ कि 'स्वच्छ दिमाग' को नयाँ पुस्ताले नरसंहार मुक्त विचारधाराको खोजीमा ढाल्दछ। [पढ्न जारी राख्नुहोस् ...]
शान्ति, मानव अधिकार र लोकतन्त्रका लागि शिक्षामा कार्य को घोषणा र एकीकृत फ्रेमवर्क
28 सक्छ, 2016 नीति 0
यो दस्तावेज शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको Geneva औं सत्रको घोषणा हो (जेनेभा, अक्टोबर १ 44 1994)) शिक्षा सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन (जेनेभा, अक्टोबर १ 44 1994)) को Conference 1995 औं सत्रको साधारण सम्मेलन घोषणा द्वारा अनुमोदन गरिएको युनेस्कोको साधारण सम्मेलन यसको २ twenty सत्र सत्र पेरिस, नोभेम्बर १ 1995 XNUMX UN युनेस्कोको यसको अट्ठाईस सत्र पेरिस, नोभेम्बर १ XNUMX XNUMX। मा। [पढ्न जारी राख्नुहोस् ...]
जातीय भेदभावको आधारमा शिक्षाले कसरी स्कूल हिंसा र बदमाशी रोक्न सक्छ?
फेब्रुअरी 18, 2017 गतिविधि रिपोर्टहरू 0
युनेस्कोले स्कूल हिंसा र बदमाशी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संगोष्ठीको एक भागको रूपमा ग्लोबल सिटीटिन्सशिप शिक्षा मा एक कार्यशाला आयोजना गर्‍यो: एभिडेंस टु एक्शन, जुन सियोल, रिपब्लिक कोरियामा भएको थियो। [पढ्न जारी राख्नुहोस् ...]